Waa kuma xiddiga Liverpool ay u aragto baddelka Mohamed Salah? – Gool FM
(Liverpool) 20 Juun 2021. Inkastoo aysan dooneyn inay iska iibiso Mohamed Salah, haddana Liverpool ayaa ka cabsi qabta hubanti la’aanta mustaqbalka fog ee xiddigeeda, waxayna sidaas darteed baadi goob ugu jirtaa xiddig ay ka dhigto baddelkiis hadii uu Salah dalbado in la fasaxo.
Reds ayaa lagu soo warramayaa inay baddelka macquulka ah ee Mohamed Salah ay u aragto weeraryahanka kooxda Sassuolo ee Domenico Berardi.
Wararka ka imaanaya dalka Taliyaaniga ayaa sheegaya inuu Berardi taageero weyn ka heysto macallinka Liverpool ee Jurgen Klopp.
Wargeyska Gazzetta dello Sport, ayaa sheegaya in kooxda Ingiriiska ka dhisan ay sidaas darteed dooneyso soo xero gelinta xiddiga wacdaraha ka dhigaya kulammada xulka qaranka Taliyaaniga ee tartanka Euro 2020.
Si kastaba ha ahaatee, Sassuolo ayaa la sheegay inay 26-jirkan ku iibineyso 43 milyan oo gini iyadoo ay xusid mudan tahay 17 gool dhaliyay 30 ciyaarood uu dheelay Serie A fasalka dhammaaday ee 2020-21.